China Cover ụkpụrụ customization nkọwapụta Customization mfe akwụkwọ ndetu Manufacturers na Factory | Yuxingyua
Ngwaahịa: OPP onwe-nrapado akpa tinyere katọn maka nkwakọ
Akwụkwọ mmiri akwụkwọ akwụkwọ akwụkwọ mmiri
Họrọ akwụkwọ maka akwụkwọ ndetu ụmụ akwụkwọ:
Nke mbụ, ogo akwụkwọ ahụ. N'ozuzu, akwụkwọ eji eme ihe bụ akwụkwọ aja aja Daolin. Ọdịdị nke akwụkwọ abụọ a bụ nke kachasị mma n'etiti akwụkwọ ederede ọhụụ. Kinddị mpempe akwụkwọ a nwere obere ihe eji eme ihe, na -emepụta ink ink, ezigbo ire ụtọ, kọmpat na opaque udidi, mmiri na-eguzogide mmiri, mmetụta dị ike atọ, yana ezigbo mma na ọnụ ala!
Ahaziri akwukwo akwukwo akwukwo
1. Akwụkwọ bụ otu n’ime ihe kachasị mkpa nke akwụkwọ ndetu. Nwere ike ịchọ akwụkwọ nke na-anaghị agbapụta mkpịsị odee ma nwee ezigbo ederede ederede. 2. Format: Anyị nwere ọtụtụ nha dịgasị iche iche iji gboo mkpa dị iche iche, ha niile nwere ike zute. 3. Inogide: Anyị na ngwaahịa na-eji elu-okpomọkụ kpo oku mama na perforated metal nkechi inlay, n'ime peeji nke bụ nnọọ anụ, na akwụkwọ akụkọ nwere ụfọdụ waterproof arụmọrụ. 4. Uzo ojiji: enwere ike igbasa ya, ma enwere ike igbasa ibe di n'ime. Na mkpokọta, ngwaahịa anyị bụ nhọrọ kacha mma
2. Nke abuo, agba nke akwukwo. Onye ọ bụla maara na akwụkwọ agba aja aja, nke dị nro, bụ nhọrọ maka ndị na-eji ihe edetu iji dee n'ime ibe.
Nledo anya n'ime akwukwo akwukwo akwukwo
Nke atọ, ọkpụrụkpụ nke akwụkwọ ahụ. Enwere mpempe akwụkwọ abụọ nke a na-ejikarị eme ihe: 80 gram na 100 gram. Akwụkwọ gram 80 dị ntakịrị karịa akwụkwọ gram 100, ihe dịka ọkpụrụkpụ dị ka akwụkwọ edemede anyị na-adịkarị. Enwere ike iji ụdị akwụkwọ abụọ ahụ mee ihe maka ibe dị n'ime. Ihe dị iche n’agbata akwụkwọ abụọ ahụ bụ: gram iri asatọ dị ntakịrị karịa, ụtarị na-adị nro, mmetụta ederede ga-adịkwu mma; ebe 100 gram nke akwụkwọ siri ike karị na ide Ọ dịghị mma dịka gram 80, nke ọ bụla nwere uru nke ya.
Pu Pu akwụkwọ anụ akwụkwọ
Akwụkwọ akwụkwọ ndenye akwadoro maka akwụkwọ ndetu ahaziri ahaziri
Nke anọ, ịga were were n’ọnụ nke akwụkwọ. Ọfụma nke ederede akwụkwọ dị ezigbo mkpa, nke dị ezigbo mkpa na usoro nhazi akwụkwọ (gluing). Elu nke ezigbo akwụkwọ ga-adị larịị ma dịkwa larịị, ma na-ede ihe n’enweghị nsogbu. Akwụkwọ nke adịghị mma nwere mmetụta na-agụ agụụ, na akwụkwọ akụkọ nwere mkpọtụ karịa.
Qing akwukwo akwukwo ohuru
Nke gara aga: ahaziri logo, ahaziri nkecha n'ime peeji nke nduhie akwụkwọ
Osote: Omenala nkọwa omenala katuunu ụkpụrụ anụmanụ katuunu igbu akwụkwọ mmado
Embossed Akpụkpọ anụ Notebook
Embossed Akwụkwọ ịde ihe
Ihe ederede ederede
Epomi Akwụkwọ Akwụkwọ Edetu
Soft Mkpa Notepad
ahaziri logo, ahaziri nkecha n'ime peeji nke ...
Elu-mma environmentally friendly Pu leathe ...
omenala akpụkpọ anụ agba omenala nkọwapụta busin ...
Ahaziri akpụkpọ anụ agba, ahaziri ọla ou ...